प्रतीभाका धनी माईकल फराडे (प्रस्तुती रमिला बस्नेत) |
प्रतीभाका धनी माईकल फराडे (प्रस्तुती रमिला बस्नेत)
2018-10-22 कला साहित्य
माईकल फराडेलाई कतिजनाले चिन्नुहुन्छ ? उनको बारे जानकारी छ ? छैन भने म उनको बारेमा केही राेचक कुराहरू लेख्न गइरहेको छु । एकपटक अवश्य पढ्नुहाेला माईकल फराडे सामान्य गरिब परिवारमा जन्मिएका मान्छे हुन । जब उनी सानो थिए उनको चारजना दाजुभाइ थिए उनका बाबु पनि बेरोजगार नै थिए परिवार धान्न मुश्किल परिरहेको थियोे ।
एकदिन उसका बाबुले उनलाई काम लगाउने काेशिश गर्छन् । जुनबेला उनी करिब १०/११ वर्षको हुन्छन् । उनको परिक्षणका लागि बाबुले उनलाई घरमै रहेको पुरानो टिसर्ट देखाएर बाबुले भन्छन् । छाेरा यो टिसर्ट कति रुपैयाँको हाे उनले भन्छन् १ डलरको हाे । यसलाई तिमीले जसरी हुन्छ २ डलरमा बेच्नु पर्छ । बाबुको कुराहरू सुनेर एकछिन फेडारे टाेलाउछन् । अनि हुन्छ बुबा भन्छन् । अनि फडारेले त्यो टिसर्ट मजाले धुन्छन । सुसुकाउछन अनि सुकिसके पछि पुरानो टिसर्ट बाेकेर सारा बजार घुम्छन् । बल्लतल्ल त्यो एकदमै निर्दाेष र मासुम बच्चाले बेच्दै हिडेकाे देखेर एउटा बटुवाले किन्दिन्छन् ।
त्यसपछि फेडारे खुशी हुदै घर जान्छन् । अनि बुबा मैले बेचे पैसा लिनुस । उसका बुबा खुशी हुदै स्यावास बाबू तिमीले फेरि यो काम गर भन्छन् । पुनः अर्को टिसर्ट निकालेर यो कतिको बाबु छाेरा १ डलरको बुबा हाे स्यावास यसलाई अाज तिमीले २० डलरमा बेच्नु पर्छ । पुनः फेडारे निराश हुदै हुन्छ । बुबा भन्छन् । त्यो दिन फेरि उनलेे कतैबाट एउटा अाईडिया लाउछन् । अनि उनलेे मिकिमाउसकाे फाेटाेलाई राम्रोसँग अार्ट गर्छन् । त्यो टिसर्टमा अनि जहा धेरै धनिमानीका छाेरा छाेरी पढ्छन् त्यो ठाउँको गेटमा बसेर भन्छन् । यो एकदमै सुन्दर छ । मिकिमाउस वाला टिसर्ट मात्रा २० डलरको हो । अनि उनी जस्तै एउटा बच्चा उनको बाबुको हात समाउदै निस्केको हुन्छ । त्यो टिसर्ट बच्चालाई मन पर्छ । अनि उसको बाबु संग कर गर्न थाल्छ बाबुले कचकच सहन नसकेर छाेरालाई टिसर्ट किन्दै उनलाई अझै थपेर ५ डलर टिप्स पनि दिन्छ ।
फेडारे खुशी हुदै घर फर्कन्छन । उनका बुबाले उनलाई पुनः स्यावास दिदै अर्को काम दिन्छन् । जुन १ डलरको टिसर्ट दिएर उनलाई पुनः २०० डलरमा बेचेर अाउन भन्छन् । अब यो सुनेर फेडारे अत्यन्तै दुखित हुन्छन् । तर उनलेे हिम्मत भने हार्दैनन् । अब टिसर्ट बाेकेर अाईडिया लाउछन् । अनि टिसर्ट बाेकेर बजार निक्लेको अवस्थामा सुन्छन् । हलिउडकाे एकदमै सुन्दरी फारा उनको शहरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत अाफ्नाे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछिन भने पछि उनी सबैलाई उछिन्दै त्यो ठाउँमा पुगेर सेक्युरिटी लाई समेत झुक्याएर फरा भएको ठाउँमा पुग्छन् र भन्छन् मलाई हजुरको अटोग्राफ चाहिन्छ चाहिन्छ चाहिन्छ यो सुनेर निर्दाेष बच्चा हो भन्दै फराले एकदमै सुन्दर अटोग्राफ दिन्छिन् ।
अनि अनि फेरि पुनः बजार निस्किन्छ र भन्छन् बलिउडकाे एकदमै सुन्दर फरा द्वारा अटोग्राफ भएकाे टिसर्ट मात्रै २०० डलरको मात्रै २०० डलरको यो सुनेपछि ठुलो भिडभाड लाग्छन् । र सबैलाई त्यो टिसर्ट लिने रहर जाग्छ । र त लिने म लिने त तछाड मछाड चल्छन् । अनि उनलाई भन्छन् म ३०० दिन्छु । फेरि अर्कोले म ५०० दिन्छु । अर्कोले म १००० दिन्छु यथावत् कुराहरू चल्दै गर्दा पुनः भिडभाड एकजनाले भन्छन् त्यो टिसर्ट म लान्छु २००० डलर दिन्छु । त्यस पछि उसले त्यो टिसर्ट २००० डलर बाेकेर फिडारे घर फर्केर जान्छन् । र यो सब देखेपछि उनका बाबुले उनलाई अंगालो हालेर धेरै बेर रुन्छन् र भन्छन् छाेरी अब तिमीले संसार जित्ने छाै । हो तिनै फिडारे हुन । अहिले बास्केटबलको भगवानकाे रुपमा परिचित छन् । उनलेे करिब दुईदर्जन वास्केट बलमा विश्वास किर्तिमानी कायम गरेका छन् ।